Ihe di egwu di iche iche mere na Social Media na 2013 | Martech Zone
Ihe di egwu di iche iche mere na Social Media na 2013
Mọnde, Febụwarị 3, 2014 Sọnde, Febụwarị 2, 2014 Douglas Karr
Enweghị atụ na-enyocha ọrụ a na-eme kwa ụbọchị na mgbasa ozi mgbasa ozi nke ihe karịrị 6,000 nnukwu ụdị site na ngalaba 30 iji nyere ndị ahịa aka nyochaa ndị na-asọ mpi, ịrụ ọrụ benchmark na iji amamihe na-asọmpi. Unmetric emepeela ngalaba nke mbụ amatala akara mgbasa ozi soshal midia nwere ihe karịrị 20 qualitative na quantitative metrics to your brand against your competitors.
Agbanyeghi na otutu puku mkpọsa gbabatara n'ọtụtụ nyiwe mmekọrịta mmadụ na 2014, Unmetric nyochachara ọtụtụ puku ụdị ma chọpụta mkpọsa kacha mma, tweets, vidiyo na stunts… tinye ha niile na ozi a. Pịa na infographic maka nkọwa zuru ezu banyere mkpọsa na blog Unmetric.
Hotdị 10 kachasị ewu ewu na Social Media Marketing
Feb 4, 2014 n’elekere 12:24 nke abali
Ndewo Douglas, daalụ nke ukwuu maka igosipụta ozi infographic anyị, yabụ na ị nwere mmasị na ya! O were mgbalị dị ukwuu nke mmadụ iji wepụ ya ọnụ n'ihi na ị chefuru ọtụtụ mkpọsa dị ukwuu na-eme n'ime afọ ahụ, mgbe anyị chere na anyị emechaala, anyị ga-adọta mkpọsa ọzọ. Idozi ndepụta ahụ were ruo mgbe ebighi ebi, akụkụ a haziri dị mfe! You nwere ọkacha mmasị onwe gị site na afọ gara aga?
Feb 4, 2014 na 5:30 PM
Kpamkpam - hipgbọ mmiri Pants m bụ ọkacha mmasị. Ọ bụghị n'ihi na nke rụrụ arụ ma n'ihi na ọ bụ a stodgy ochie ika mere ihe n'ezie ize ndụ. M ka na-achị ya ọchị.
Feb 5, 2014 n’elekere 1:32 nke abali
You hụrụ Dickensian ha n'ụgbọ mmiri My Pants? “Nnọọ uru” ”ọ chịrị m ọchị. Ihe nkiri Lexus instagram bụ ihe okike, echere m na ha ga-enwerịrị ihe ịga nke ọma na ya. Kraft's Zesty Guy bụ onye a hụrụ n'anya na ụmụ nwanyị nọ n'ọfịs anyị ma tinye ya n'agbanyeghị mkpesa sitere n'aka ndị ọrụ nwoke!